Umqhubi we-Tommy Armor EVO akenzanga okwangoku, kodwa i-brand isenayo iiklabhu zegalufu zisebenzisa igama le-EVO. Oko kuthetha ukuba abaqhubi be-EVO, ngolunye usuku, babuyele kwi-Tommy Armor lineup. Ngezantsi uhlaziyo lwe-300 cc Tommy Armor EVO umqhubi esasishicilela xa le nkampani yayisenziwa. Kodwa okokuqala, amagama ambalwa malunga ne-Tommy Armor brand.
I-Tommy Armor Inkampani kunye neBrith
Igama elithi "Tommy Armor" lide lide elinye lidumileyo kwigorfu.
Okokuqala, ngenxa yendoda ngokwakhe: UTommy Armor wayengumnqweno omkhulu weqonga eli-3 kwiminyaka ye-1920 neye-1930, ngoko yaba ngumnye wabaqeqeshi abafuna ukufuna umdlalo. Wadluliselwa kwiHlabathi yeHlabathi yeHlabathi yeGama ngo-1976. (Umzukulu wakhe, uTommy Armor III, waphinde waphumelela kwi- PGA Tour .)
Iiklabhu zegalufu zeGolf ze-Armor-branded zibuyela emva. Kwaye inkampani kunye neentengiso ziye zadlulela kumaninzi amanini kwiminyaka emashumi. I-Tommy Armor Inkampani yaze yaqalisa ezinye iimpawu ezidumileyo: I-Odyssey Golf brand ye-putters yathengwa yiCallaway esuka eTommy Armor Golf ngo-1997. Ngama-1980, uTommy Armor wayengumqondiso wokuqala wokuqala wokuthengisa iimpahla ezide .
Kwaye ngo-1997, iTommy Armor Co. ngokwayo yafunyanwa yiTearDrop Golf. I-TearDrop kamva yathengisa i-brand kwenkampani egama lingu-Hilco Consumer Capital, kunye ne-United States ye-Tommy Armor-branded-tooled-gadget yezinto ezisemagqabini zathengiswa kuphela kwiindawo zevenkile yokuthengisa ezemidlalo.
I-Sports Authority yathengile ngokuthe ngqo umzobo ngowama-2010, kwaye namhlanje unayo i-brand Tommy Armor.
Ukuthenga i-Tommy Armor Golf Clubs namhlanje
Ewe, ekubeni i-brand is owned (e-US) yi-Sports Authority, ngokucacileyo indawo enye uthengela iikhampasi zeTommy Armor kunye nezixhobo. Kwaye udidi olupheleleyo kunye olukhulu kakhulu lweeklabhu kunye nezixhobo lwenziwa phantsi kwegama leSigqeba.
I-brand ibuye ithengise kwi-Amazon.
Ukuhlaziywa kwangaphambili: Tommy Armor EVO Driver
(Ukuhlaziywa oku kulandelayo kwapapashwa ngoJulayi 20, 2003. Siyiphinda kwakhona apha.)
Umbuyekezi: uRob Cisco
Ukujongana nokukhubazeka: 8
Iqela elifunyenwe ukusuka: Ivenkile yempahla yezemidlalo
Iindleko: $ 75
Izithuba zeli Club
Ixabiso - awukwazi ukulibetha.
Ukukhululeka apho lo mqhubi angabetha khona.
Ukhangeleka okhangayo njengoko kukho umqhubi apho.
Iingxaki zeli Club
Ukubanjwa kwempahla kungekhona kwezinto ezigqwesileyo.
Ubungakanani beClubhead buphela ngo-300cc, ngoko ke kubangakumbi abadlali abakhubazekileyo. ( Inqaku le-Ed : Namhlanje, ezininzi iiklabhu ezithwala uphawu lweTommy Armor ziyi-design-improvement designs).
Ukudlala umqhubi weTommy Armor EVO:
Ndandifuna umqhubi we- TaylorMade 300 xa ndifumana le nto. Eli qela liza nge-300cc, elingaphantsi kwemilinganiselo yanamhlanje. Ndikhethile i-10-degree ( loft ) version - nayo ifika kuma-8.5-, 9- no-12-degrees.
I-clubhead impahla "yintsimbi yokukhangela," leyo, ngokwemveliso, idala ubuso obunzima kakhulu ukunika i-golfer indawo enkulu kakhulu kunotane. Kwaye banokuthi bachaneke ngemali ngelo ngxelo.
Eli qela liye linye labaqhubi abachanekileyo. Umqhubi oxolela kakhulu ubukhulu be-clubhead.
Kude umda uhamba, awuhambelani ne-TaylorMade engumnikazi wam, nangona iyenzela ngokuchaneka.
Enye yeengxaki ezimbalwa endinokujamelana nazo nale khlabathi kukuba inomdla wokuguqula umgca kwi- hook . Ndiyicinga ukuba oko kusenokungenxa yokuba ndibetha umdwebo kwaye i-stock shaft ayinokuba yinyaniso "eqinile". Kodwa kungenasidingo ukuthetha, ngenxa yento endiyihlawule ngayo le club ingakwazi ukufaka ngokutsha ngokutsha abaqhubi ababizayo apho.
Ngoko ukuba unomdla wokufumana umqhubi omtsha kwaye awufuni ukuhlaziya ikhaya lakho ukuze ufumane enye, thabatha umqhubi weTommy Armor EVO. Lo mqhubi akakucetyiswa ngabo bafuna ukubetha abaqhubi abafana ne-Volkswagen Beetles!
AmaHlathi aseGrisi naseRoma
Imfazwe Yehlabathi II: iScharnhorst
I-Aristotle Inkathazo yegama
Iimpawu ezilula zaseJapane
Ileta yokuBhenela iSampula yoKhutshwa kwezeMfundo
I-Ford F-150 iCollect Picks Trucks: 1987-1996
Imfazwe Yehlabathi II: I-Admiral Frank Jack Fletcher
Ziziphi iimbuzo ezine kwiPasika yePasika?
I-Top 20 Country Music Iingoma Zonke Ixesha